भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा ! - Everest Dainik - News from Nepal
२०७६, ७ कार्तिक बिहीबार
काठमाडौंः सरकारले भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा भएको छ । भाइटीकाको भोलिपल्ट १३ कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको हो ।
सरकारी क्यालेण्डरमा कात्तिक १३ गते बिदा छैन । तर, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बिदाको घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस मोटरसाइकलमा पनि जोरबिजोर !
नेवारी समुदायको भाइटीका १३ कात्तिकमा पनि पर्ने भएकाले त्यस दिन बिदा दिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ३ कात्तिकमा एउटा टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो ।
ट्याग्स: गृह मन्त्रालय, भाइटीका